The Purity of Vengeance (2018) | MM Movie Store
Jussi Adler-Olsen ရေးသားခဲ့တဲ့ The Purity of Vengeance: A Department Q ဆိုတဲ့နာမညျကြျော ဝတ်ထုကိုအခွခေံပွီး ပွနျလညျ ရိုကျကူးထားတာပါ….ကိုပနျဟဂေနျမွို့မှာ ထူးဆနျးတဲ့(၃)လောငျးပွိုငျလူသတျမှုဖွဈပှားခဲ့တယျ…
လူသတျသမားဟာ အဆောကျအဦးတဈခုထဲမှာ လူသအေလောငျးတှကေို မံမီရုပျအလောငျးဖွဈအောငျစီမံထားပွီး စားပှဲဝိုငျး တဈခုမှာ နရောခထြားခဲ့တယျ…ထူးဆနျးတဲ့ ဒီအမှုကွောငျ့ ရဲတှလေညျး ခေါငျးမီးတောကျကုနျတယျ…စုံထောကျတှလေညျး (၃)လောငျးတောငျဆိုတော့ သဲလှနျစတှေ ရနိုငျသမြှာရှာဖှကွေတယျ..
ရရှိတဲ့ သဲလှနျစတှအေရ စုံထောကျတှဟော တရားခံနောကျကိုလိုကျတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ထငျသလောကျရိုးရှငျးမနသေလို တခွား လြှို့ဝှကျခကျြတှကေပါ သူတို့ကိုစောငျ့ကွိုနတေယျ…ကိုငျး ဘာကွောငျ့လူတှသေတျတာလဲ….
လှညျ့ကှကျတှကေ ဘာတှဖွေဈမလဲ…လြှို့ဝှကျခကျြတှကေရော ဘာတှဖွေဈမလဲ..စုံထောကျမှုခငျးကားကောငျးကွိုကျသူတို့အဖို့ ခံစားကွညျ့လိုကျပါဦး
Jussi Adler-Olsen ရေးသားခဲ့တဲ့ The Purity of Vengeance: A Department Q ဆိုတဲ့နာမည်ကျော် ဝတ္ထုကိုအခြေခံပြီး ပြန်လည် ရိုက်ကူးထားတာပါ….ကိုပန်ဟေဂန်မြို့မှာ ထူးဆန်းတဲ့(၃)လောင်းပြိုင်လူသတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်…
လူသတ်သမားဟာ အဆောက်အဦးတစ်ခုထဲမှာ လူသေအလောင်းတွေကို မံမီရုပ်အလောင်းဖြစ်အောင်စီမံထားပြီး စားပွဲဝိုင်း တစ်ခုမှာ နေရာချထားခဲ့တယ်…ထူးဆန်းတဲ့ ဒီအမှုကြောင့် ရဲတွေလည်း ခေါင်းမီးတောက်ကုန်တယ်…စုံထောက်တွေလည်း (၃)လောင်းတောင်ဆိုတော့ သဲလွန်စတွေ ရနိုင်သမျှာရှာဖွေကြတယ်..
ရရှိတဲ့ သဲလွန်စတွေအရ စုံထောက်တွေဟာ တရားခံနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ထင်သလောက်ရိုးရှင်းမနေသလို တခြား လျှို့ဝှက်ချက်တွေကပါ သူတို့ကိုစောင့်ကြိုနေတယ်…ကိုင်း ဘာကြောင့်လူတွေသတ်တာလဲ….
လှည့်ကွက်တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ…လျှို့ဝှက်ချက်တွေကရော ဘာတွေဖြစ်မလဲ..စုံထောက်မှုခင်းကားကောင်းကြိုက်သူတို့အဖို့ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး